प्रातःभ्रमण अर्थात् मर्निङ वाकले स्वास्थ्य देखि सर्वांगिण विकाससम्म हासिल हुने ! - Laltin Media
Home»लाईफस्टाइल»प्रातःभ्रमण अर्थात् मर्निङ वाकले स्वास्थ्य देखि सर्वांगिण विकाससम्म हासिल हुने !
प्रातःभ्रमण अर्थात् मर्निङ वाकले स्वास्थ्य देखि सर्वांगिण विकाससम्म हासिल हुने !
आजकल बिहानमा हिँड्ने ट्रेण्ड चलेको देखिन्छ। विशेषगरी, फिटनेस जागरुक युवाहरु र ४० काटेका मानिसहरु बिहानमा भ्रमण गरेको देखिन्छ । यसको प्रमुख कारण भनेको ४० पार गरेका मानिसहरुलाई सुगर, प्रेसर जस्ता रोगहरुले गाँज्नु हो । बिहान हिंड्दा खेरी यी रोगहरु नियन्त्रण गर्न सहयोग मिल्ने हुँदा मानिसहरु नियमित रुपमा हिँडेको देख्न पाइन्छ ।
मर्निङ वाक का फाइदा के के छन् ? आउनुहोस् आज त्यस विषयमा चर्चा गरौँ ।
बिहान सबेरै घर बाहिर हिँड्नु स्वास्थ्यका लागि निकै राम्रो हो। जानेर होस् वा नजानेर, बिहान हिँड्नु स्वास्थ्यका लागि फाइदाजनक छ। अझ सूर्योदयभन्दा अघिको समयमै हिँड्नु त अति उत्तम मानिएको छ।
सनातन हिन्दु परम्परामा सूर्योदयअघिको समयलाई ‘ ब्रह्म मुर्हूत’ भनिन्छ। रातको अन्तिम प्रहरलाई ब्रह्म मुर्हूत भनिन्छ। आयुर्वेदले यो समय निन्द्रा त्याग गर्नु स्वास्थ्यका लागि सर्वोत्तम मानेको छ। यो समयको विशेष महत्त्व छ। यो समयमा वायुमण्डल वा वातावरण स्वच्छ हुन्छ।
ब्रह्म मुर्हूतमा वायुमण्डलमा अक्सिजनको मात्रा धेरै हुन्छ। शुद्ध वायुप्राप्तिले फोक्सो, मन र मस्तिष्कलाई समेत स्वस्थ राख्छ। त्यसैले आयुर्वेदमा भनिएको छ, ब्राह्म मुर्हूत्तमा उठ्नाले सौन्दर्य, बल, विद्या, बुद्धि र स्वास्थ्य प्राप्ति हुन्छ।
ब्रह्म मुर्हूतमा गरिएको जे काम पनि सफल हुने पनि शास्त्रमा बताईएको छ। त्यसकारण, लाहुरेमा भिड्ने युवाहरु हुन् या परिक्षाका लागि तयारी गरिरहेका विद्यार्थी, सबैको लागि बिहानमा उठ्नु र सफा मौसममा अभ्यास, कसरत,योग आदि गर्नु उत्तम कुरा हो । यसले स्वास्थ्य मात्र नभई मानिसको सर्वांगिण विकासमा मद्दत गर्ने कुरा स्वयं सिद्ध छ ।